जेष्ठनागरिकलाई खाजा र सुत्केरीलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै वडा नं. २६ का जनप्रतिनिधिको पदस्थापन - Prime News Nepal
जेष्ठनागरिकलाई खाजा र सुत्केरीलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै वडा नं. २६ का जनप्रतिनिधिको पदस्थापन
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. २६ को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले वडाभित्र रहेका जेष्ठ नागरिकका लागि खाजा र विपन्न सुत्केरी महिलालाई पोषण खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले शुक्रबार वडा कार्यालयमा पदभारग्रहण गर्दै, वडामा रहेका जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका जेष्ठ नागरिकलाई दिवा खाजा र विपन्न सुत्केरी महिलालाई पोषण खर्च वापत दुई हजार रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन ।
पदस्थापन पछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले वडाको विकासका लागि सवै राजनितिक पार्टीको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले चुनाव अघि आस्थाको आधारमा राजनितिक पार्टीले टिकट दिए पनि विजय पश्चात सवैको साझा जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष थापाले दल विशेषका आधारमा कसैलाई विभेद नगरिने उल्लेख गर्दै, विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिदै, महानगरको उत्कृष्ट वडा वनाउन सहयोगको खाँचो औल्याए ।
कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद बरालले नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिदै, वडाको विकासमा पूर्व जनप्रतिनिधिको रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बरालले राजनितिक पार्टीहरुलाई जनताले गुण र दोषको आधारमा आवधिक निर्वाचन मार्फत अनुमोदन गर्ने उल्लेख गर्दै, युवाले नेतृत्व गरेको वडामा जनताले आशा र भरोसा गरेको बताए ।
नेकपा एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएर पराजित भएका सुर्यनाथ भण्डारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजनितिको घेरा भन्दा माथि उठेर समन्यायिक विकासमा जोडदिन आग्रह गरे । स्वतन्त्र उमेदवार नारायण लामिछानेले मुलुकमा युवा पुस्ताबाट जनताले आशा गरेको उल्लेख गर्दै, वडा नं. २६ मा परिवर्तन हुने आशा रहेको बताए ।
यसैगरी पदस्थापन पछि वडा कार्यालयका कर्मचारीसँग नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाह लगाएका बिषयमा छलफल गरेका थिए । वडा सदस्यहरु लक्ष्मी देबी भट्टराई, तिर्थवहादुर राजभाट, सुदिपराज ढुंगाना र सुजता बराल सुनारले जनताको काम छिटो छरितो गर्ने वातावरण मिलाउन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । वडा सचिव मीना भट्टराई भण्डारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यले वडाका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिने बताईन ।